Qodobbada Salaadda ee Soojeedinta Kaalmaha | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Qodobbada Salaadda ee Ku Saabsan Bixinta Kahortagga Ka Daran
Qodobbada Salaadda ee Ku Saabsan Bixinta Kahortagga Ka Daran
Sharciga Kunoqoshadiisa 8:18:
18 laakiinse waa inaad xusuusnaataan Rabbiga Ilaahiinna ah, waayo, kan xoogga idin siiyaa waa inaad isaga wax u heshaan inuu xoojiyo axdigiisii ​​uu awowayaashiin ugu dhaartay, siday maanta tahay.
Rabitaanka ugu weyn ee Eebbe sida ku xusan 3 Yooxanaa 1: 2 waa in dhammaan carruurtiisa ay ku guuleystaan ​​dhammaan dhinacyada nolosha. Maanta waxaan ku mashquulsan nahay dhibco duco oo ku saabsan bixinta ka sarraysa, Waxaan u adeegnaa Ilaah la yiraahdo Rabbi Jireh, oo ah Ilaaheenna bixiya, wuxuu Ibraahim ugu deeqay Bilowgii 13: 1-2, Wuxuu siiyay Isxaaq Bilowgii 26: 14-18, Ilaah wuxuu carruurta waa dhab Masar, kitaabku wuxuu yidhi Masar ayaa laga xayuubiyey hantideeda. Ilaaheenna waa Ilaahii xeerarka ka sarraysa.
Salaadda maanta waxaan ku dhawaaqi doonnaa waxyaalaha aan caadiga ahayn ee Masiixa. Ciise wuxuu ina fahamsiiyay Mark 11: 23-24 in haddii aynaan shakiyin, aan heli doonno wixii aan nidhaahno.
Waxaan kuu sheegi doonnaa barwaaqada nolosheena, laga yaabee inaadan u muuqan barwaaqo maanta, laakiin sida aad ugu sii dhawaaqeyso ereyada iimaanka ee noloshaada, waxaad arki doontaa wax mucjiso ah noloshaada magaca Ciise. Ku lug yeelee qodobbada salaaddaan ee aasaaska ka sarreeya ee rumaysadka, ku tukada qirashooyinkaan qalbigaaga oo dhan oo arag in Ilaah ereygiisa ku xaqiijiyo magaca Ciise. Waxaad lahaan doontaa waxaad tidhaahdo.
1. Anigu waxaan ahay abuur cusub oo Masiixa ah sidaas darteed waxaan cadeynayaa inaan ku socdo magaca cibaadada badan ee magaca ciise
2. Ciise Masiix weligiis ma uusan dhiman intii uu dhulka joogay, waxaan cadeynayaa inaanan waligey aqoon doonin sida caruurnimada ah oo ku qoran magaca Ciise
3. Ciise weligiis dhaqaale ahaan ugama xannibin cimrigiisa oo dhan oo dhulka ku yaal, sidaa darteed weligey layma xannibi doono qayb ka mid ah noloshayda
4. Waxaan cadeynayaa inaan haysto maskaxda Masiixa, sidaa daraadeed waligeeyna ubadnaan doonin fikradaha rabaaniiga ah ee ku wajahan abuur Abuurka magaca Ciise
5. Sayidku waa adhijirka i daaya, oo sidaas daraaddeed waxaan u cadeynayaa inaanan weligay u dhiman doonin doonin oo doonin mar dambe
6. Waxaan cadeynayaa inaan had iyo jeer joogi doono meesha saxda ah iyo waqtiga saxda ah ee sicir-bararka maaliyadeyda ee magaca Ciise.
7. Waan aqaan nimcada Rabbigeenna Ciise Masiix in in kastoo uu taajir yahay haddana haddana miskiin ii noqday, inaan isagaan taajirnimo ku ahaydiimo, sidaas darteed waxaan cadaynayaa inaanan weligay ahaan doonin qof liita.
8. Waxaan cadeynayaa maanta inaan ku socdaa xagga awooda magaca Ciise
9. Waxaan cadeynayaa in awooda nimcada Eebbe, aan ku liibaani doono wax kasta oo aan ku sameeyo magaca Ciise
10. Anigu waxaan ku baabtiisaa ruuxa dadaalka magaca Ciise.
11. Waxaan ku socdaa barwaaqo dhaqaale magaca Ciise
12. Magaca Ciise ayaan ku socdaa anigoo dan u ah xagga dhaqaalaha
13. Ragga iyo dumarka ayaa aniga ii doorbidaya ganacsiga Ciise magaca
14. Guuldarrooyinka ayaa iga fog magaca Ciise
15. Waxaan ku socdaa doonista Eebbe noloshayda ee ku saabsan dhaqaalahayga ku jira magaca Ciise
16. Nimcada Ilaah waxay daboolaysaa ciladayda iyo khaladaadkayga oo dhan magaca Ciise
17. Waxaan ahay nin ku guuleysta magaca ciise
18. Anigoo barakeysan baa igu mahadsan magaca Ciise
19. Anigu waxaan ahay magaca Ilaah korna u qaaday oo ka sarraysa oo ah magaca Ciise
20. Wax alla wixii aan gacmahayga saaray waxaan ku ducayn doonaa magaca Ciise.
Waad ku mahadsan tahay ciise barakeysan.
article Previous50 Xiddiggaygu waa inuu iftiimiyaa qodobbada Salaadda
Next article20 Salaada Cishaha Wadaaddada
Amosun Samuel O Janaayo 13, 2020 Saacaddu markay ahayd 3:57 am
Waad ku mahadsan tihiin shaqooyinka wanaagsan ee socda
Adebis Yahya Abriil 8, 2021 XXX: 12 pm
Nimco badan ayaa kuu gashay mudane.
Runtii waan ku barakeeyay qodobadan ducada.
Nimcada Eebbe ha kuu tarmo mudane.
5 Noocyada habaarrada ah ee Jiritaanka iyo Waxaa jira daawooyin kitaabiga ah
20 Dhibcood Salaada Difaaca Guurka
10 Qodobbada Salaadda ee Xallinta Khilaafaadka